Rugby ho an’ny olona 7 vehivavy: klioba 22 hifanintsana etsy Andohatapenaka | NewsMada
Rugby ho an’ny olona 7 vehivavy: klioba 22 hifanintsana etsy Andohatapenaka
Hanentana ny vehivavy, amin’ny alalan’ny rugby ny Tanora Garan’Teen sy ny Malagasy rugby, hisorohana ny vohoka tsy niriana. Haneho ny fananany toerana lehibe eo amin’ny tontolo iainany ihany koa ny vehivavy.
Ho fanomezan-danja ny vehivavy ary hanehoany ny maha izy azy, mikarakara lalao rugby lalaovina olona 7 ny Malagasy Rugby sy ny fikambanana Tanora Garan’Teen. Fihaonana, hotanterahina etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny asabotsy 21 sy ny alahady 22 septambra, ho avy izao.
Klioba 22 no handray anjara, amin’izany ka ny baolina lavalava sy ny fahasalaman’ny vehivavy, no lohahevitra voizina amin’izany. Nambaran’i Tahiana avy amn’ny Tanora Garan’Teen fa efa nisy ny fidinana ifotony tany amin’ireo ekipa ireo, nijeren’izy ireo ny toerana hanazarany tena, ny fombafomba hitondrany ny tenany amin’ireo lalao atrehiny sy ny ataony, mandritra ny fanomanantena. Nisy ny fifampiresahana sy ny fandresen-dahatra, tamin’izy ireo, hisoroka ny vohoka tsy niriana ka mety tsy hampivoatra azy ireo, amin’ny fanatanjahantena ataony. Nohenoina ihany koa ireo hetahetany, nentina tany amin’ny Malagasy Rugby. Araka izany, natao ho fitaovana hanabeazana sy hampitana hafatra ho an’ny fahasalaman’ny vehivavy ny rugby, hisian’ny filaminan-tsaina sy fitandremana. Hisy fanentanana sy fitiliana ny viriosy VIH Sida, mandritra ireo roa andro hanatanterahana ny fifaninanana io. Ankoatra izay, hisy koa lalao ataon’ny Makis A sy B ary fifanintsanana hiadiana ny “Top 20”, hikatrohan’ny Cheminots sy ny Uscar. Mpiahy ity fifaninanana ity, ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera, Rtoa Rakotondrazafy Lalatiana.